Detox: Echiche Ụgha na Eziokwu - Mmasị Mmasị
Home » blog » Detox: Ụgha na Eziokwu
Iji ugbo uhie, ma ọ bụ sauna, iji kwalite sweating na-enyere aka belata ọnụnọ nke toxins n'ime ahụ gị. Otu n'ime ụzọ anụ ahụ gị nke na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha, bụ site na mmiri ọkụ (sweating). Otú ọ dị, ọ bụ nanị nchọta ihe (1% ma ọ bụ obere) nke toxins n'ime ahụ gị ka a chụpụrụ n'ụzọ dị otú a. Ụlọ nkwari akụ na steam bụ isi uru dị na inyere gị aka metabolism, dị ka ịṅụ ọkụ bụ ihe dị mkpa na-achịkwa metabolic.
Iji ugbo uhie, ma ọ bụ sauna, mepee pores nke akpụkpọ ahụ gị nke na-enye gị ohere ịme ka ọ dịkwuo mma site na ịsụsọ. Ọ bụghị mkpịsị nsị nile nwere ike wepụ n'ụzọ dị otú a, ma ọ bụrụ na ọ bụ ya na - ebute mmeghachi omume a na - ahụ anya na akpụkpọ ahụ gị; mgbochi, otutu, ma ọ bụ rush ka ihe atụ. Igwe mmiri dị elu n'ime ụlọ na-egbochi ịsụsọ gị ka ọ ghara ikpochapu, na-enyere aka n'ịgbado mmanụ mmanụ, nke pụtara obere ihe otutu ma ọ bụ akpụkpọ ahụ. Mgbe ị na-arụ ọrụ, karịsịa, iji sauna, ma ọ bụ ebe a na-akwọ ụgbọ mmiri, na-enyere aka ọcha ma detoxie gị.
Nri iri nri na-agụnye nnukwu ego ị ga-eji na-etinye ego, nakwa na ị na-egbochi oke ókè. Ihe oriri e mere iji nyere aka dozie ahụ gị nwere ike ịdị na-egbochi dị ka ịchọrọ ka ọ bụrụ. Ọ dị mma ịchọrọ, na ọ bụrụ na ị na-egbochi ihe oriri, ọ ga-esiri gị ike ịrapara na ya.
Nri oriri na-edozi nri nwere ike itinye nri obi siri ike ma ọ bụrụ na ha gụnyere ihe ndị kwesịrị ekwesị, dịka na ụdị ụdị nri ọ bụla ọzọ. Akwụkwọ nri Leafy, mkpụrụ citrus, na osisi bụ ihe atụ nke ihe oriri ndị dị ọnụ ala ma dị irè na nri ndozi. Mgbakwunye nke tii tii na nri gị dịkwa mma iji mee ka ahụ gị dịkwuo mma.
Nri na-edozi onwe ya bụ usoro ngwa ngwa ma dị irè ị nwere ike iji mee ka ibu ibu. Ugbu a, ọ bụ eziokwu na mgbe ị na-amalite nri na-edozi ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịnweta ngwa ngwa, ọhụhụ mara ọkwa. Otú ọ dị, mgbe ị kwusịrị ụdị nri a, ọ ga-abụrịrị na ihe ọ bụla dị njọ. Nke a bụ n'ihi na ibu dịkarịsịrị oke mmiri. Nri nri detox na-enweghị mmega ahụ na-ebutekwa nhalata, site na ọnwụ nke ahụ.
Ihe oriri nke na-agụnye ihe dị iche iche nke nrụpụta ihe na-akwalite ihe oriri na mmega ahụ mgbe nile bụ ọtụtụ ụzọ dị irè maka ọnwụ. Na-eji ndị enyemaka metabolic dịka nri oriri na-edozi ọṅụṅụ (dị ka tii tii) na-eme ka arụmọrụ metabolic gị dịkwuo ukwuu. Ebube uzo dị ntakịrị karịa ngwa; nakwa ịhụ na ibu dị ka ọ ga-agbanyụ, ọ bụghịkwa ụbụrụ na-efu.
Ị ga-enwe nkụda mmụọ, nwee ike ma ọ bụ na-adịghị mma n'oge niile ị na-arụ. Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị ka ọ na-ada mbà na ụbọchị mbido mgbe ịmalitere ọkpụkpụ. Dị ka oge a bụ ebe ahụ gị na-agbanwezi na ihe ọhụrụ ike, ebe ị na-anwa ịba ụra. Ọ bụrụ na mmetụta a ka na-adị, ọ dị mkpa ka ị kwụsị na nyochaa ihe itinye gị na ya.
Mgbe nmalite nke mmalite nke ebe obibi gị ebe ị na-ada mbà, ma eleghị anya na-arịa ọrịa, ị ga-ahụ onwe gị ka ị dị mma karịa tupu ịmalite. Ndị mmadụ na-enwekarị mmetụta dịka a ga-asị na ha nwere ume, ma ọ bụ obere ihe ndị ọzọ. Ọ bụghị ihe ọhụrụ iji nweta ezigbo ụra nke ọma.
Ihe ọṅụṅụ na-asacha bụ ụzọ dị irè a pụrụ ịdabere na ya iji dozie ahụ. Site na iri nri a na - eme naanị n'ime mmiri (ụlọ ahịa zụtara ma ọ bụ nke a na - arụrụ n'ụlọ), ị na - ere ọkụ na - echekwa ụlọ ahịa na - echekwaghị ya. Enweghị ụbụrụ n'ụdị ụdị nri a nwere ike ime ka ntachi anya.
A ga-eji ihe ọṅụṅụ mee ihe na njedebe nke nri nchịkwa; iji gbochie ikpochapu na afọ ntachi, ebe ọ na-eme ka abamuru ndị ọzọ nwee ike ịbawanye uru. A na-atụ aro na a ga-eji juices dị ka ngbanwe nke nri, ma ọ bụ nri, kama ịmepụta nri gị dum. Ebe ha bụ calorie dị ala, nhọrọ dị mma nke nwere oke nri ụfọdụ.
Otutu nke na - abawanye uru mmiri gị na - enyere aka na - eme ka ahụ nsị. Ọ bụ ezie na mmiri na-aṅụ mmiri ma na-edozi mmiri dị ezigbo mkpa, ma mgbe ị nọ na mgbe ị na-anọghị na ya, dị ka ihe ọ bụla, ọtụtụ ihe nwere ike bụrụ ihe na-emerụ ahụ. Mmiri mmiri dị ukwuu nwere ike ịkpata mmetụta nke ọrịa, nkwarụ, na isi ọwụwa.
Mmiri na-enyere aka n'ịgbatị ma wepụ ihe ndị na-adịghị mma site na usoro gị digestive. Ya mere, nke a nwere ike inyere aka na nchịkọta nke toxins na ihe ndị na-adịghị mma na ntiri gị. Ma uru kachasị dị na ya bụ na ịbawanye mmiri nke mmiri gị na-eme ka njedebe gị dị elu, na-akwalite ịrụ ọrụ nke ọma (gụnyere nhazi nhazi).
Nke a na-enye Samuel Socorro site na Ụlọ Ahịa Ụlọ Ahịa, Sam bụ ọkachamara ọkachamara n'iche ahụ ike na ahụike ma na-ede ma na-amụ ihe ndị dị ka nke a karịa afọ 10.
January 29, 2017 Sam Socorro blog Enweghị asịsa